ShenZhen WMD Circuits Ltd. - Shenzhen WMD Circuits, Ltd
အချိန်: 2018-08-09 hits:
Shenzhen WMD Circuits, Ltd. စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 2002 ရှန်ကျန်းအတွက်, လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်းအမြင့်ဆုံးတိကျစွာ PCBs အမျိုးမျိုးတို့ကိုတစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်ဦးဆောင်အခန်းကဏ္ဍကစားထားပြီး. ကျနော်တို့ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်အသေးစား-to-အလတ်စားအသံအတိုးအကျယ်အလုပ်အကိုင်များအာရုံစိုက်. သုတေသနအတွက်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ, ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၏မွမ်းမံမှုစနစ်, ကျနော်တို့ PCB ၏လယ်ပြင်တွင်အသံဂုဏ်သတင်းကိုခံစားခဲ့ကြ, ပြင်းထန်သောယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အတူယနေ့ဈေးကွက်ထဲမှာထွက်မတ်တပ်ရပ်.
WMD ထက်ပိုရှိပါတယ် 300 ထမ်းများနှင့်တစ်ဦး PCB အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ 8000 စတုရန်းမီတာ. ကျနော်တို့ထိပ်တန်းအရည်အသွေးထုတ်လုပ်ရန် State-Of-The-Art လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများနည်းပညာကိုအသုံးချရန်နှင့် 100% ယုံကြည်စိတ်ချရသော PCBs နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကျယ်ပြန့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအများအားဖြင့်အသုံးပြုအဖြစ်ဘုံများတွင်အသုံးပြုကြသည်, စက်မှုဇုန်ထိန်းချုပ်, ကွန်ပျူတာလျှောက်လွှာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ, စမ်းသပ်မှုတူရိယာ, စစ်ရေး, နှင့် functional ဖြစ်စေစမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးတို့ကို၌ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှုများ. ကျွန်ုပ်တို့၏ပြီးပြည့်စုံသောစီမံခန့်ခွဲမှု, အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ကျွန်တော်တို့ကိုသည်အခြားပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ပိုပြီးစျေးကွက်ရှယ်ယာအနိုင်ရစစ်တိုက်ခြင်းငှါအဘို့နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထမ်းသော့များမှာ. အပြင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့် On-အချိန်ပေးပို့များ၏တည်ငြိမ်မှုကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင့်မားတဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကိုဆောင်ခဲ့. ဖောက်သည် \_ 's စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုကျနော်တို့အဘို့အဘယ်သို့ကြိုးပမ်းခဲ့ကြနေကြတယ်.
ကျနော်တို့ ISO9001 လေပြီ, ISO14001, SGS နှင့် ul လက်မှတ်များ. နှစ်ဦးစလုံးအိမ်နှင့်ပြည်ပမှာဖောက်သည်ထံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ထမ်းများနှင့်ဖြစ်ပွားနေသောထောက်ခံမှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးစားအားထုတ်နှင့်အတူ, ကျွန်တော်မှတက်ပေးနိုငျ 24 အလွှာ, 10အောင်စကြေးနီ, High-တိ(ရော်ဂျာ), မြင့်မားသော TG, အစာရှောင်ခြင်းအလှည့်နှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားအဆင့်အထိအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်မှ AL-အခြေစိုက်စခန်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပျဉ်ပြား.
WMD ကတည်းက၎င်း၏ Smt အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲစတင်ရန် 2016, တစ်မှတ်တိုင်အီလက်ထရွန်းနစ် provider ကဖြစ်လာ၏မြော်လင့်ခြင်းနှင့်အတူ, နှင့်ဖောက်သည်များကိုပိုမိုပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း. အခုချိန်အထိ, ကျွန်တော်အိမ်နှင့်ပြည်ပမှာဖောက်သည်ထံမှ PCBA အမိန့်အများကြီးအနိုင်ရနှင့်သူတို့၏မြင့်မားအသိအမှတ်ပြုမှုရခဲ့ကြ. WMD ယခုတစ်မှတ်တိုင်ပံ့ပိုးပေးဖြစ်လာသည်.
ပြီးခဲ့တဲ့လက အောင် WMD Circuits PCB ပျဉ်ပြားတို့အတွက်လိုအပ်ဘယ်အချက်အလက်?